Nzọpụta – 2azụ
Home / Nzọpụta
Azịza ya dị nkenke bụ site n'amara Chineke, ma e nwere ihe ọzọ ka ọ na-, n'ezie, gụnyere Jesus’ àjà, okwukwe anyị, na omume anyị.
E nwere onye na-aga n'ihu esemokwu banyere ma onye pụrụ ịbụ azọpụta naanị n'ihi okwukwe ya ma ọ bụ ma ọ bụrụ na okwukwe ga-esonyere site n'ọrụ. Na ụfọdụ uche, nneme ebute ma ọ bụ ike nwere okwukwe na-enweghị na-egosi na ọ (na omume ndị na-egosi a hụrụ Chineke na ndị ọzọ).
The Church na-akụzi:
“Ayi ozuzu abịa site n'amara Chineke. Grace bụ amara, na free na-erughịrị mmadụ enyemaka na Chineke na-enye anyị za òkù ya ịghọ ụmụ Chineke, kuchiri umu, ndị nketa nke Chineke agwa na nke ndu ebighebi”
–Si Catechism of the Catholic Church 1996; izo aka John 1:12-18; 17:3; Pọl Degaara ndị Rom 8:14-17; na Pita Nke abụọ Letter, 1:3-4.
Kraịst kwere na mkpa nke Chineke na amara na maka nzọpụta, ma e nwere dị iche iche echiche banyere ihe nke ahụ pụtara.
Katọlik kweere na Chineke na amara na bụ efficacious. Ọ dịghị ahụ nanị ekpuchi mmehie ayi, ma n'ezie-agbanwe anyị na-eme ka anyị dị nsọ.
Na mgbakwunye, Katọlik kweere na site n'ịnara onyinye nke Chineke na amara na, anyị na-akpọ ka akwado ya. Ya mere, anyị nwere ike na-arụsi ọrụ ná nzọpụta anyị-ma a ọrụ kpam kpam dabere n'elu Chineke na amara na; anyị apụghị ịzọpụta onwe anyị.
Katọlik na-kweere na nzọpụta adịghị a otu oge ihe omume, kama a usoro nke na-emekarị nekpughe n'elu N'ezie nke onye a nọ ndụ.
Aka ịghọta ihe mere anyị mkpa ka a zọpụta, anyị mkpa ịghọta ihe na-akpata anyị dara ọdịdị, i.e., mmehie mbụ.
Mmehie mbụ na-ezo aka na nmehie nke Adam na Iv na iri mkpụrụ osisi. Otu nwere ike lee ya anya dị a mmadụ dị mpako–ọchịchọ bụghị ife Onye Okike ma na-adị ka Ya, ndi nke ya hà (-ahụ Book of Genesis, 3:5).
The ikpe ọmụma na nsogbu ndị mmehie nke Adam na Iv gafere ruo agbụrụ mmadụ nile (ịhụ Jenesis 3:16-19). Dị ka Saint Paul ekewetde, “Sin bịara n'ụwa site n'aka otu onye, ​​ọnwụ esikwa ná mmehie na ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile n'ihi na madu nile mehiere.” (Lee ya Degaara ndị Rom 5:12, na ya Mbụ Letter na Kọrint, 15:21-23).
Nwoke ahụ na o nwere mgbe ọnọdụ dị mma e kere eke nke Chineke, chọpụtara na ya na aghaghị ịhụju ihere, wezuga enweghị ike eweghachiri enyi Andibot na a machiri ya site nupụrụ. (Ee, Chineke nwere ogologo ebe nchekwa.)
mgbapụta (via n'onwu na nbilite n'onwu)
Otú ọ dị, Ya enweghi ngwụcha ebere Chineke kwere mkwà izite Nwa nke Ya n'ụdị a onye ga-agbara Ya ụmụaka furu efu–-anwụ anwụ n'ihi mmehie ha (-ahụ Genesis 3:15). Dị ka Saint John dere, “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere ya na nwa na onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. N'ihi na Chineke zitere Ọkpara ya n'ụwa, ọ bụghị ikpe ụwa, ma na ụwa nwere ike site n'aka ya zọpụta.” (-ahụ Oziọma Jọn 3:16-17, na Jọn Akpa Letter 4:9-10.)
N'oge ya, Ọkpara Chineke, nke bụ ma n'ụzọ zuru ezu-Chineke na n'ụzọ zuru ezu-nwoke, ga-kpamkpam na-enye onwe ya chụọ àjà ka Chineke, idozi nwoke jụ ya kpamkpam na ihe na-egosi nrubeisi zuru okè dị ka Pọl kwuru ga- Akwụkwọ ozi ndị Rom 5:15, Ndị Kọlọsi (1:19-20), na Hibru 2:9.
Aka ịdị irè nke incarnation mkpa inwe ezigbo; otú, Nwa mkpa iji n'ezie na-na ọdịdị mmadụ, na-Emmanuel, "Chineke nọnyeere anyị" (ịhụ Matiu 1:23, John 1:14, na Jọn Akpa Letter, 4:2-3). Ọ bụ na o nanị ghọọ n'ọdịdị nke a nwoke, dị ka ụfọdụ ndị nọgidere na-enwe, Ya Àjà na nnọchite anyị gaara adị, i.e., ọ garaghị adịkwa ọ bụla, ma dị ka mmadụ, ọ tụfuru ndụ ya.
Ya mere, Jesus’ n'onwu na ọnwụ na-etolite na-eju anya banyere ihe nile yiri ụgha. Ọnwụ ya ọnwụ nke Onye Okike nke Ndụ, ọnwụ nke Chineke.1 (Maka ozi on n'onwu, biko gaa na page.)
N'ihi na n'obe e debeere ndị kasị heinous omempụ, echiche nke na-efe onye ahụ nwụrụ n'ụzọ a yiri ludicrous ka ọtụtụ n'ime ndị ọgbọ ya. “Anyị na-ekwusa Kraịst kpogidere,” kwuru Saint Paul ke akpa leta ndị Kọrịnt (1:23), “ihe ịsụ ngọngọ nye ndị Juu na ihe-nzuzu ka ndi mba ọzọ.”﻿
Otú ọ dị, Ndị Kraịst na Cross bụ ihe ịrịba ama nke victory- mmeri nke ezi omume n'ebe mmehie na nke ndụ ọnwụ (ịhụ Oziọma Luk, 9:23; Saint Paul Mbụ Letter na Kọrint, 1:18; na ya Akwụkwọ ozi ndị Galeshia, 6:14; Ndị Kọlọsi, 1:24; na Hibru, 13:13).2
Note, kwa, na n'Obe e buru n'amụma na see onyinyo ke peeji nke agba ochie, ebe Aịzaya onye amụma dere, sị, "N'ezie, ọ gbawokwa anyị griefs na-ebu anyị sorrows; ma anyị ji kpọrọ ya kpaworo aka, ọkọtọde Chineke, na n'ala. Ma ọ unan mmebi iwu anyị, ọ echifịa anyị iniquities; n'elu ya bụ kara aka, nke mere ka anyị dum, na na n'ọnyá ya na anyị na-agwọ ya " (ịhụ Isaiah, 53:4-5 na 52:14 na Abụ Ọma, 22:14-18). N'ezie, Jesus kwuru na 22nd Psalm si Cross, ịgụpụta oghere akara, "Chukwu m, Chukwu m, gini mere I ji rapu nání Mu?"na Matiu 27:46. The Psalm si 18nke amaokwu, "Ha na-eke uwe m n'etiti ha, na m uwe fere nza,"Kwekọrọ ozugbo na ihe ndị mere n'Obe na a na e zoro aka na Oziọma Jọn 19:23-24. Exodus 12:46 na Zechariah 12:10 na-ezo dị ka nke ọma (ịhụ John 19:36-37).]
Anyị na-ahụ n'àjà Kraịst sekwara onyinyo na oyiyi nke Isaac trudging tinyere dutifully na osisi nke àjà ya n'elu ya azụ (ịhụ Jenesis 22:6; lee kwa Saint Clement nke Alexandria, The Ozizi nke Children 1:5:23:1). Kraịst eweta ọṅụ ọnwụ na-atụ ya ka mma na ọla agwọ ndokwasa on a osisi, nke Jehova gwara Mozis ka ejiji ka ndị gāta agwọ nwere ike anya n'elu ya na-adị ndụ (ịhụ N'Akwụkwọ Ọnụ Ọgụgụ, 21:8-9, na John 3:14-15).
Ndiwụt Ya ngụkọta n'aru ọnwụ, Christ Jesus si n'ili n'ụbọchị nke atọ. Dị nnọọ ka ọnwụ Ya bụ ihe àmà nke ndi mmadu, Ya na mbilite n'ọnwụ bụ ihe àmà nke ya divinity (ịhụ Matiu, 12:38 na 27:62 na John 2:19, n'etiti ndị ọzọ.).
Ịnwụ anwụ bụ anyị sitere na Bible; o bilitesịrị, anyị emesi obi ike na anyị onwe anyị ga-ebili (ịhụ Pọl Degaara ndị Rom 8:11; ya Nke abụọ Letter ndị Kọrint, 5:15; na Pita mbụ Letter, 1:3-4). Dị ka Saint Paul dere ya Mbụ Letter na Kọrint 15:14, "Ọ bụrụ na Kraịst na a kpọliteghị mgbe ahụ nkwusa anyị bụ n'efu okwukwe-unu bu ihe efu."
Christianity mbụ ji anya ha hụ Kraịst ahụ bilitere bụ ndị inyom, ọtụtụ Ichi Saint Mary Magdalene (-ahụ Matthew 28:1, ọmụmaatụ). Na mbụ na-agba akaebe na Mbilite n'Ọnwụ, Okwukwe si foundational eziokwu, ahụ e nyere na ndị inyom bụ ukwuu ịrịba. Oge ahụ, -àmà nke ndị inyom rụrụ obere arọ (Luke 24:10-11), ọ na-anọchi na ihe mere na ama Mbilite n'Ọnwụ kemgbe a Ụgha, mgbe ahụ ọ ga-e wuru nke mere na Jesus okowụtde mbụ a nwoke, ikekwe na-Saint Peter ma ọ bụ otu n'ime ndịozi-ihe ka onye, nke ahụ bụ, akaebe ha rụrụ ihe ndị kasị ibu kama ndị kasị nta.
The Grace Chineke
The uru nke Christ nzọpụta ọnwụ na-etinyere mmadụ nanị na amara nke Chineke (-ahụ Pọl degaara ndị Rom, 3:24), ma olee otú ahụ nzọpụta natara?
Ọ bụ ihe ezi uche na daa ikom–anyị–na-enweghị ike ịbịakwute ya na ọnọdụ. , Ọ ga-akpa enye anyị ike na onyinye nke okwukwe, nke ahụ kwe anyị na-efe Ya (-ahụ Jọn akwụkwọ ozi mbụ, 4:19).
N'echiche, nzọpụta, bụ onyinye Chineke ka nwoke ka ọ gaghị ekwe omume n'uru ma ọ bụ irite ya na anyị onwe anyị; -ahụ Gospel of John 6:44, ma ọ bụ ihe mbụ Pọl degaara ndị Kọrịnt,12:3, ma ọ bụ akwụkwọ ozi o degaara Faịlimọn, 2:13.
Ebe a kpọkwasịrị Ya, na anyị maara na anyị ezughị okè ma ọ bụ mgbe niile na-eme dị ka Ya, anyị ga-meghachi omume na nchegharị, ma ọ bụ ịhụ mmezu nke mmejọ anyị, na nsacha omume Baptism. Dị ka Saint Peter dere, sị, "Chegharịanụ, na baptizim kwa unu nile n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu na unu ga-enweta onyinye nke Mmụọ Nsọ. " (-Ahụ mwube nke onyenchịkwa, 2:38, na Mark 16:16).
Ya mere, Baptism abugh ihe atụ mee ihe, ma a sacrament na-egosi edo amara, -eme ka anyị n'ezie ezi omume (kwa Pita akwụkwọ ozi mbụ, 3:21). The Bible akụzi n'ụzọ doro anya na anyị ga- “a mụrụ ọzọ” site na baptizim ime mmiri ịbanye heaven; -ahụ Gospel of John 3:5, Akwụkwọ ozi Pọl degaara Taịtọs, 3:5; na mwube nke onyenchịkwa, 8:37.
Ọ na e ọcha na Baptism, ọ dị mkpa ka mmadụ wee nọgidesie ike a kwuo nke ịdị nsọ, n'ihi na "ọ bụ onye na-adịru ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta" (-ahụ Matthew, 10:22). Ya mere, okwukwe ga-n'ụzọ zuru ezu ndụ ma na-egosicha ọrụ nke ịhụnanya, n'ihi na "okwukwe site n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, bụ ihe nwụrụ anwụ. " (-Ahụ Epistle of Saint James, 2:17, na akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Galetia, 5:6.) Jehova na-ekpughe na na gara aga, Ikpe nzọpụta a ga-akwadoro ma ọ bụ ka gọrọ agọ dabeere na n'elu onye ọgwụgwọ nke ndị ogbenye, ndị kasị nta n'ime ụmụnne (-ahụ Matthew, 25:34 na 7:21-24 na 19:16-21; John 14:15; na Jọn akwụkwọ ozi mbụ, 3:21 na 5:1-3). Saint James na-ede, “Ị na-ahụ na a nwoke a kpasuru site n'ọrụ na bụghị nani site n'okwukwe” (James, 2:24; mesiri ike kwukwara, site anyị).
Omume ka okwu ọnụ ike, ma ...
Akwụkwọ Nsọ n'ihu na-akụzi na ezi ihe anyị meworo n'ụwa ga-utịp ke Heaven. Ndị na-akpagbu n'ihi Ya Jesus na-ekwu "Ṅụrịa ọṅụ na-enwe obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe "na Matiu 5:12, na "Kpachara Anya Maka eme gị piety n'ihu mmadụ iji ga-hụrụ ha n'ihi na mgbe ahụ ị agaghị enweta ụgwọ ọrụ n'aka Nna unu nke nọ n'eluigwe" na Matiu 6:1; -ahụ Matthew, 5:46 na 6:19-20; Saint Paul akwụkwọ ozi ndị Kọrịnt (5:10) na Hibru (6:10); Pita akwụkwọ ozi mbụ (4:8) na n'Akwụkwọ Mkpughe, 14:13.
Ọzọ, ọ dị mkpa icheta na n'uru anyị na-enweta na-abịa bụghị site na omume na na nke onwe ha, ma si omume Christ nzọpụta ọnwụ on Calvary. Dị ka Jizọs kwuru, "Abụ m osisi vaịn, unu bụ alaka. Ọ bụ onye na nānọgide kwa n'ihu-m, na m na ya, ọ na ọ na-na-amị ọtụtụ mkpụrụ, n'ihi na e wezụga m, ị pụrụ ime ihe ọ bụla. "Lee n'Oziọma Jọn, 15:5, na akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Phillipians, 4:13.
a (dị nnọọ) Catholic nkọwa Akwụkwọ Nsọ nke na mkpokọta nghọta nile nke nzoputa bu kwetakwara na ego site ndị Kraịst oge mbụ mere eme na ihe odide. Ọmụmaatụ, Saint Justin Martyr na kọwara na ihe 150 A.D., dị ka ọmụmaatụ, "Onye ọ bụla ga-enweta ebighị ebi ntaramahụhụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ nke omume ya kwesịrị" (First Apology 12). Origen dere n'ihe dị ka 230, "Onye ọ bụla na-anwụ anwụ na ya mmehie ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ sị na ha kwere na Kraist, adịghị n'ezie kwere na Ya; na ọbụna ma ọ bụrụ na nke dị na-enweghị ọrụ na-akpọ okwukwe, okwukwe dị otú ahụ ọ nwụrụ anwụ, dị ka anyị gụrụ na Epistle kpọkwasịrị aha James (2:17)" (Akwụkwọ na-akọwa John 19:6).
Nani site n'okwukwe? abụchaghị.
Ụfọdụ na-agbalị na-egosi na okwukwe naanị bụ zuru ezu maka nzọpụta site n'ihota Saint akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Efesọs, 2:8-9: "N'ihi na amara ka e jiworo zoputa unu site n'okwukwe; na nke a abụghị gị onwe gị ime, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị n'ihi ọrụ, ghara onye ọ bụla kwesịrị isi. "Otú ọ dị, na ikpe a ga-agụ na onodu.
Paul na-ama anyị ikpe ihe o bu ọrụ karịrị bụ ọrụ ndị, -aba mba Juu bụ Ndị Kraịst n'ihi na wetaara ha ga-azọpụta naanị site n'onye ahụ nke ha idebe Iwu. Nke a ụdị agbasoru iwu n'isi echiche rụnyere a siri orù-nwe-ayi na Chineke, dika agāsi na otu onye nwere ike-ekpegara ya ekpere banyere Ụbọchị Ikpe nakwa ina ugwo maka ọrụ sụgharịrị, mbenata nzọpụta ka a ụdị ime mmụọ emekọ ihe ego! Mbuso a eche echiche otú Pọl degaara, "N'ihi na Ibi úgwù mkpa maka ihe ọ bụla, ebighị úgwù abụghịkwa, ma na-edebe ihe Chineke nyere n'iwu,"Nke o doro anya na-egosi omume. Lee ihe mbụ Pọl degaara ndị Kọrịnt, 7:19, na ozi ndị o degaara Ndị Rom, 13:8-10, na Galeshia, 5:6 na 6:15.
Dị ka Pọl, okwukwe mmadụ si, a ga-dịrị ndụ na site ọrụ nke ọrụ ebere, "Okwukwe na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya" (kwa Galeshia, 5:6). Na Paul kweere ezi ọrụ dị oké mkpa nzọpụta bụ nke ihe ahụ e amaokwu ozugbo Ndị Efesọs 2:9, nke na-ekwu, "Anyị bụ ndị ya kwee efọd, kere Christ Jizọs maka ọrụ ọma, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo, na anyị kwesịrị ije ije na ha. "
Ọzọkwa, N'akwụkwọ ozi o degaara ndị Rom, o dere,, "N'ihi na Ọ ga-ọ bụla dị ka ọrụ ya: ndị site ndidi na mma-eme na-achọ ihe ebube na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ọ ga-enye ndụ ebighi ebi; ma ndị bụ ndị factious na-adịghị erube isi n'eziokwu, ma na-erubere ajọ omume, a ga-enwe ọnụma na iwe. … Ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume n'ihu Chineke, ma ndị na-iwu nke ga na-agu n'onye ezi omume " (-ahụ amaokwu 2:6-9, 13).
Paul na-akpọ ndị na-eso ụzọ Kraịst aka ịghara ọnọdụ nke mere na ndị ohu na-aghọ kuchiri ụmụ Chineke (-ahụ Ndị Rom, 8:14); na-erubere Ya isi bụghị nke ọrụ ma ọ bụ egwu, ma n'ihi ịhụnanya.3 The ọrụ Ndị Kraịst ebu, mgbe ahụ, abụghị ihe ọrụ arụ n'ihi na a ụgwọ, ma nke ụmụaka ịhụnanya elekọta nna-ha azụmahịa. Na-eleghara na-eme ezi, Ya mere, na-na-na-n'anya Chineke.
Na-eche nke ya otú a: Chineke bụ ọrụ ebere, otú ịhụ Chineke n'anya ma na-eme dị ka ọ ga-agụnye ọrụ ebere ndị ọzọ. Ya mere, abụọ “kasị ukwuu” nyere n'iwu–Chineke n'anya ma agbata obi gị n'anya–apụta otu akwado ibe.
'Okwukwe Naanị’ na Bible?
N'ụzọ dị, ezie na, dị ka anyị hotara n'elu, onye ebe okwu ahụ “okwukwe naanị” -egosi na Akwụkwọ Nsọ bụ ihe na Letter nke James, nke na-ekwu, "Ị na-ahụ na a nwoke a kpasuru site n'ọrụ na bụghị nani site n'okwukwe " (2:24, mesiri ike kwukwara), nke, n'ezie, bụ ihe dị nnọọ iche na ụfọdụ ndị ga-enwe i kweere.
Sịkwa ihe mere ụfọdụ na-agbalị iji wepụ Saint James’ Epistle si Bible na-akwado ha presumptions banyere nzọpụta.
Mgbe Pọl kwuru okwu ya na okwukwe bu ihe dị mkpa, o mere otú mesie ya ike na-eme nri bụ ezughị. Ọ nwere ka a mere dị ka ihe ruuru ihe. James-emesi ike mkpa iji nọgide na-ọrụ ebere. Ozizi ha na-apụta nanị; ha na-arụkọ.
Ọ dịghị ekwe omume ikewapụ okwukwe si ọrụ dị ka ọrụ ndị ahụ bụ mmezu nke okwukwe (-ahụ James, 2:22). N'ezie, St. James, (2:17), okwukwe enweghị ọrụ bụ na-abaghị uru. Anyị ga na-arụ ụka, -efu na chakoo.
na nchikota, site ọnwụ Ya, Jizọs mere ka afọ ojuju na Chineke; Ọ kwụrụ ụgwọ zuru price nke nwoke na mgbapụta. Jehova akwụ infinitely ọzọ n'uru karịa a ga-achọ iji zọpụta mmadụ nile dịtụrụla ndụ n'ụwa ma ọ bụ mgbe ga-adị ndụ; na ihe ọ bụla ọzọ a chọrọ. Ma n'otu oge ahụ bụ Chineke gwara nwoke isonye na ya na-arụ ọrụ nke mgbap ta (-ahụ akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Kọlọsi, 1:24, na Jọn akwụkwọ ozi mbụ, 3:16), dị nnọọ ka nna bụ mmadụ nwere ike ịjụ nwa ya iji nyere ya aka n'ọrụ ya, ọ bụ ezie na o nwere ike na-arụ ọrụ mma ma ndị ọzọ rụọ ọrụ nke ọma na ya onwe ya.
Chineke chọrọ ka anyị na-ekere òkè n'ọrụ Ya, ọ bụghị n'ihi mkpa ma n'ihi ịhụnanya na ọchịchọ inye ùgwù n'ahụ anyị ka anyị wee dị ọtụtụ karịa ụmụ anụmanụ. Na-ekwu na ezi ọrụ na-achọrọ maka nzọpụta gaghị eleda àjà Kraịst, ma ka ahu nagide ya. N'ụzọ dị otú, ọ bụghị site anyị kpọkwara na anyị na-akpọ ka, mepụta, na mezue ezi ọrụ, ma ọ bụ site na ude na ọ bụ site ná mgbalị ndị ahụ na ihe Christ merie anyị na Cross.
"Ọ na-kwụsịtụrụ ụwa na-kwụsịtụrụ,"Dere Saint Melito nke Sadis na banyere 170 A.D.; "Ọ na-ofu elu-igwe bụ ofu; onye kpọgidere ihe niile A kpọgidere nkụ; Nna-ukwu bụ ofụt; Chineke na-gburu " (Paschal okwuchukwu). ↩
Saint Justin Martyr na (d. dị ka. 165) hụrụ otú n'ụdị nke Cross, "Kasị ukwuu nnọchianya nke (Kraịst) ike na ikike,"Na-apụta ìhè ala n'oge nile nke ụmụ mmadụ n'ụwa, na masts ụgbọ mmiri, na arụpụta ọgụ na ngwaọrụ, na ọbụna ụmụ mmadụ na ọnụ ọgụgụ onwe ya (First Apology 55). Ndị Kraịst oge mbụ mgbe nile ka ndị nsọ nsọ ogbugbu maara dị ka akara nke obe, nke na-adịru taa dị ka otu n'ime ndị kasị distinguishing akara nke Christian Okwukwe. The Bible nweela nke ihe ịrịba ama nke Cross a hụrụ na ndeputa nke nwere na-eme na-ekwesị ntụkwasị obi na-anata a na-echebe akara n'egedege ihu ha, dị ka Ezekiel (9:4) na agba ochie na Akwụkwọ Mkpughe (7:3 na 9:4) na agba ohu. The nkwado maka akara nke obe di ike na eluigwe na ala si n'oge ụbọchị (-ahụ Tertullian The Crown 3:4; Nwunye m 5:8; Saint Cyprian nke Carthage, -àmà- 2:22; Lactantius, The Divine Institutes 4:26; Saint Athanasius, Inem na incarnation nke Okwu 47:2; Jerome, Akwụkwọ Ozi 130:9, et al.). ↩
Pope Clement nke Iri na Otu (1713) dere, “Chineke na-agọzi ihe ọ bụla ma ọrụ ebere; n'ihi na ọrụ ebere naanị ewetara Chineke nsọpụrụ.” ↩
Ka 21, 2019
Ka 20, 2019
Ka 19, 2019
Ka 17, 2019